४९ र ५१ प्रतिशतबिचको फरकः स्थानीय चुनाव विशेष | Hamro Patro
नेपाली समय: 22:36:51
नेपाली मतदाताहरु वास्तवमै बैकल्पिक शक्तिको पर्खाईमा छन् र हिजो पनि थिए । माओवादीको शाषन स्वाद सुस्तरि चित्त नपरेको सकेंत देखियो नेपाली काँग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ २९. ८ प्रतिशत र समानुपातिक तर्फ २५.५५ प्रतिशत मत ल्याएर प्रथम ठूलो संवैधानिक पार्टी भयो ।
मतगणना जारी छ अनि जारी छ मत परिणामका अड्कालवाजी, कसले जीत्ला, कस्ले हार्ला ? कति फरक होला ? अनि तयार छन् मतगणना केन्द्र अगाडी अबीर र फूलमालाहरु ।
सरल भाषामा भन्दा कुल मतको ४९ प्रतिशत संघार हार्नेहरुको सिमा हो भने जित्नलाई न्यूनतम ५१ प्रतिशत मत त चाहीयो नै । आउनुहोस यही ४९ र ५१ प्रतिशतबिचका चुनावी छनौटहरुका कुरा गरौँ ।
पहिलो चरणको संविधानसभाको निर्वाचन देखिका कुराहरु उक्काउदा प्रत्यक्षतर्फ ३०. ५२ प्रतिशत र समानुपातिक तर्फ २८.८२ प्रतिशत मत ल्याएर नेकपा माओवादी अगाडी आएको थियो ।
पुराना फेरिहस्त बोकेका पार्टीहरुमध्य नेपाली काँग्रेसले दोश्रो अनि नेकपा एमाले तेश्रो स्थानमा आएको थियो ।
बृहत हिसाबले अझ भनौ राष्ट्रिय परिपेक्ष्यमा कुनै एउटा पार्टीले स्पष्ट बहुमत ल्याएन्, सामान्य अर्थमा भन्दा ४९ कटेर ५१ छुन सकेन । नेपाली मतदाताहरुको फरक स्वाद भने प्रष्ट थियो, पुरानो ईतिहास नभएतापनि सशस्त्र द्धन्दको पृष्ठभुमी अनि सर्वाहारा वर्गको अधिकार र समानताको स्वपनील सपनाहरु गज्जबले बिके । नेपालीहरुको फरक स्वादको चाहनाले माओवादी नंबर १ संसदीय पार्टी भएकै हो, प्रथम र दोश्रो संविधान सभाको विचमा ।
यिनै र यस्तै कुराहरुबिच प्रथम संविधान सभा विघठन भई दोश्रो संविधान सभाको चयन भयो, ५ वर्षपछि सन् २०१३ मा ।
माओवादी त नेकपा एमाले पछीको तेश्रो स्थानमा पुग्यो, सामान्य हो यी उतारचढावहरु प्रजातान्त्रिक ईतिहासमा । तर दोश्रो चरणको संविधानसभाका्े चुनावले पनि ४९ कटेर ५१ छुन नसक्दा सत्ता समीकरणको खेलमा ससाना श्रेत्रीय पार्टीहरु विशेषतः तराई केन्द्रित पार्टीहरुको महत्व अत्यन्त रह्यो ।
अहिले आएर संघीय गणतान्त्रिक नेपालले तेश्रो चुनाव गरेको छ । दुर्भाग्य भन्नुपर्दछ सार्वभौम देशले स्थानीय चुनाव २० वर्षपछी गरेको, लामो समय पछि स्थानीय प्रतिनिधिहरु छनौटकालागि गाँउगाँउमा ब्यालेट बाकसहरु पुगेका छन् । प्रथम चरणको निर्वाचन सुसम्पन्न भएर मतगणना हुँदै छ अनि त्यही ४९ र ५१ को दौड कायम छ ।
प्रारम्भिक श्रोत र मत तथ्यांकले यसपालि एमालेलाई अगाडि ल्याएको छ । नेपाली चुनावहरुको श्रृंखलाले नेपाली मतदाताहरुको बदलिँदो छनौट अनि बैकल्पीक शक्तिको चाहना देखाएको छ । पुराना पार्टीहरुलाई गज्जबले पछ्याउन र उछिन्न पनि सफल नयाँ पार्टीहरु जस्तै विवेकशील नेपाली अनि साझा पार्टी यसका उदहारण हुन सक्दछन् । अर्कोतर्फ केही पुराना स्वादहरु नयाँ प्याकेटमा आएका छन् केही नयाँ पार्टीहरु मार्फत, जनताले अनुहार र दर्शन दुबै नयाँ खोजेका हुन् या हैन, मतपरिणामले बताउनेछ ।
एउटा कुरा भने प्रष्ट छ, अहिलेसम्मका नेपालीहरुको बहुमतले छानेका दलहरुले धर्म निभाउन भने नसकेकै हुन् । यसपाला भने स्थानिय रुपमा हुन आटेको अख्तीयार प्रत्यायोजन्, स्थानीय प्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा अनि जनचासोको वृद्धिले केही राम्रो होला भन्ने आशा पलाएको छ ।
माओवादी बाट असन्तुष्ट जनतम काँग्रेसको पोल्टामा पुगेकै हो तर यसपाला भकुण्डो संभवत नेकपा एमालेको कोर्टमा जाँदैछ, जनमतले त्यही संकेत देखाईरहेको छ । विकास र सुब्यबस्था एउटा मृग तृष्णा र स्वपनील गोलमात्र भएको छ । राजनैतीक यो खेलमा फाउल प्ले बन्द होस्, अब आउने दिनहरुमा विकास र सुब्यबस्था कायम होस् ।
५१ ले ४९ प्रतिशतको मतलाई पनि संवोधन गरोस् ।